Shotcretre - Henan Kol Research Keming Mechanical Co., Ltd.
Shotcretre / gunite ngwa
Shotcrete, gunite ma ọ bụ sprayed ihe bụ ihe ma ọ bụ ngwa agha ekekpepde site a sooks na pneumatically atumatu na elu ike ọsọ jidesie a elu, dị ka a na-ewu Usoro. Ọ na a sikwuo ike ot ígwè mkpara, ígwè ntupu, ma ọ bụ emep uta eri.
Shotcrete bụ na-emekarị ihe niile na-yana idobe okirikiri okwu n'ihi na ma udu mmiri-mix na akọrọ-mix nsụgharị. Na ọdọ mmiri ewu, Otú ọ dị, shotcrete na-ezo aka mmiri mix na gunite nkụ mix. N'ebe a, okwu ndị a na-adịghị kennyeghari.
Shotcrete-etinye na sụkọtara n'otu oge, n'ihi na ike na nozulu. Ọ nwere ike sprayed na na ụdị ọ bụla ma ọ bụ ọdịdị nke elu, gụnyere vetikal ma ọ bụ na-efefe n'elu ebe.
Akọrọ vs. mmiri mix
T ọ akọrọ mix usoro-agụnye ịtụkwasị akọrọ Efrata n'ime a hopper wee erute ha pneumatically site a sooks na nozulu. The nozzleman akara na mgbakwunye na nke mmiri na nozulu. The mmiri na akọrọ ngwakọta bụ kpam kpam mbuaha, ma na-agwụ agwụ ka ngwakọta akụrisị ndibọbọ n'elu. Nke a na-achọ a ọkà nozzleman, karịsịa n'ihe banyere oké ma ọ bụ kpamkpam mesikwuru ngalaba. Uru nke akọrọ mix usoro bụ na mmiri ọdịnaya nwere ike gbanwere instantaneously site nozzleman, ikwe irè a pụrụ isi chọta na efefe na vetikal ngwa enweghị iji accelerators. Akọrọ mix usoro bụ bara uru na idozi ngwa mgbe ọ dị mkpa ka ha kwụsị ugboro ugboro, dị ka ndị akọrọ ihe onwunwe na-adị mfe atara ke sooks.
Wet-mix shotcrete agụnye pumping nke a na mbụ kwadebere ihe, a na njikere-mbuaha ihe, na nozulu. Abịakọrọ ikuku na ẹkenam na nozulu na-akpali ngwakọta na na ndibọbọ n'elu. The mmiri-usoro usoro n'ozuzu na-arụpụta obere rebound, n'efu (mgbe ihe na-ada n'ala), na ájá tụnyere ndị akọrọ-mix usoro. Onye kasị ukwuu uru nke mmiri-mix usoro niile Efrata na-agwakọta ya na mmiri na nwekwara chọrọ, na-ibu mpịakọta pụrụ enịm ke obere oge karịa akọrọ usoro.
S hotcrete igwe dị nke ịchịkwa zuru usoro na-eme ka ọ dị nnọọ ngwa ngwa na mfe. Manual na n'ibu ụzọ na-eji mmiri spraying usoro ma mmiri agbasara ihe bụ omenala n'ọrụ site igwe. The elu ịgba ndapụta na nnukwu cross-ngalaba na-achọ ọrụ na-ígwè. Concrete spraying systems na duplex nfuli na-bụ-eji na-arụ ọrụ na mmiri mixes. N'adịghị ka ot ihe nfuli, ndị a na usoro nwere izute ndị ọzọ chọrọ anapụta a ihe eruba na bụ dị ka mgbe nile dị ka o kwere, ya mere na-aga n'ihu, na-ekwe nkwa homogeneous ịgba ngwa '.